सावधान ! खाना खाइसकेपछि यी कुरामा ध्यान नदिँदा क्यान्सर हुन सक्छ पूरा पढ्नुहोस् – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/सावधान ! खाना खाइसकेपछि यी कुरामा ध्यान नदिँदा क्यान्सर हुन सक्छ पूरा पढ्नुहोस्
काठमाडौँ । शरिरि स्वास्थ राख्नको लागि स्वस्थ खाना मात्र हैन खाना खाइसकेपछि के खाने के नखाने भन्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । हामीले खाएको खानाले शरिरमा जति बेला काम गर्छ तब डाइजेशन सहि छ या छैन् भन्ने बोरे थाहा पाउँछौँ । तर खाने क्रममा नै हामले थुप्रै गल्तीहरु गरिहेका हुन्छौँ ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
थाहा नहुँदा नहुँदै गरिएको गल्तीले शरिरमा नकारात्मक असर पर्छ । दिनहुँ गर्ने हाम्रो गल्तीले क्यान्सरको खतरा बढ्दै गएको हुन्छ । हामी जति गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ त्यसको दुईगुणा क्यान्सरको खतरा बढ्दै जान्छ । त्यसकारण आज हामी तपाईहरुलाई खाना खाइसकेपछि तुरुन्त गर्न नहुने कामहरुको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ ।
चिया पिउनु : खाना खाइसकेपछि तुरुन्तै चिया पिउनु हुुँदैन् । खाना खाने बित्तिकै चिया पिउने गर्नाले चियाको पातामा पाइने एसिडिटी पोपर्टीको समस्या बढ्छ । त्यसकारण खाना खाइसकेको १ घण्टापछि चिया वा कफि पिउनु राम्रो हुन्छ ।
स्मोकिंग गर्नु : खाना खाने बित्तिकै स्मोकिंग गर्नाले क्यान्सर र मुटुक रोगको खतरा बढ्छ ।
ब्रश गर्नु : खाना खाने बित्तिकै ब्रस गर्दा दाँतको इनेमल माथिल्लो तहमा निस्कन्छ । यसले दाँतमा ब्याक्टेरिया लाग्ने खतरा बढ्छ । त्यसकारण खाना खाएको एक आधा घण्टापछि मात्र ब्रस गर्नुपर्छ ।
फलफूल खानु : खाना खाएको एक घण्टा भित्रमा फलफुल खाँदा एसिडिट वा इनडाइजेशन हुनसक्छ । योसो गर्दा ओभरइटिंग हुने भएकाले मटोपनको समस्या बढ्दै जान्छ ।
नुहाउनु : खाना खाइसकेपछि अथवा खाना खाएको आधा घण्टापछि नुहाउँदा डाइजेशन ढिलो हुन्छ । खाना पूर्ण रुपमा डाइजेशन नहुनुको कारण एसिडिटी र कब्जियत जस्ता समस्याहरु बढ्दै जान्छ ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******